Oku kufanele iposti yebhlog ... Enkosi, Kathy! | Martech Zone
Oku kufanele iposti yebhlog… Enkosi, Kathy!
Ngexesha elidlulileyo ndiye ndaqala ukubeka amakhonkco am emihla ngemihla kwindawo enye yebhlog kwindawo yam. Ndiyenzile ngale ndlela ngenxa yezizathu ezimbalwa:
Andinanto ndingayongeza kwincoko kodwa ngokuqinisekileyo bendifuna abafundi bam bafumane ezi 'zincinci' zolwazi.
Bendingafuni ukuphinda ndenze into esele ibhaliwe ngumntu wonke. Andikwazi ukukuxelela indlela ekwakukhathaza ngayo kwaye kukuba ndigqithe kwi-100 feed kumfundi wam wangaphambi kwe-iPhone, i-iPhone kunye ne-post-iPhone. Ukuba kukuphinda uhlaziye, phosa ikhonkco phezulu kwaye wenziwe ngalo.
Andivanga nasiphi na isikhalazo malunga nokunxibelelana- zonke izimvo zichanekile. Ndiyathemba ukuba uyayithanda ngale ndlela ukuze ndidlulise ulwazi endiluthathayo.
Esi sithuba sahlukile, nangona kunjalo. Andikwazi ukuyikhomba ngaphandle kwenqaku. Kuzo zonke iiblogi endizichazileyo kwindawo yam, Ukudala Abasebenzisi abathandekayo yeyona nto ndiyithandayo.
Nanku umzekelo olula wokuba inamandla kangakanani le bhlog, uKathy Sierra ushwankathele into endiyilwelayo kwaye ndiyisebenze yonke imihla yomsebenzi wam ngokusisigxina ngezinto ezimbini ezilula ezibonakalayo:
Kwaye kwisoftware ngokuvumelana:
Ndithethile malunga neeblogi ezininzi kodwa ndiphephe ukunxibelelana nemeko embi uKathy azifumene ekuyo. UKathy wayejolise kwizithuba ezoyikisayo nezothusayo kwenye indawo. Andifuni kufaka amagama emlonyeni kaKathy kodwa ndigweba ngokubhala kwakhe, kuyacaca ukuba itshintshe yonke into. Ndiyacinga ukuba injani le nto kwaye iingcinga zam kunye nemithandazo yam ikunye noKathy.
UKathy ushiya ukubhloga ngenxa yokuvezwa kwabantu abaninzi. Abantu abaninzi batyhala uKathy ukuba aqhubeke nebhlog yakhe kodwa andicingi ukuba ilungile kwaphela. UKathy wayenobubele kakhulu kwibhlog yakhe, yayimangalisa. Imixholo yebhlog ibinokwenziwa ngokulula kuhlelo okanye ezimbini ze Intloko yokuqala iincwadi, kodwa endaweni yoko ezi ngcinga zimnandi sanikwa mahala.
Enkosi, Kathy! Ukuba ujoliso lwakho yayikukunceda okanye ukutshintsha umntu omnye ngebhlog yakho, uphumelele kunye nam. Ndijonge phambili kulangazelelo lwakho olulandelayo! Ndingathanda ukukubona uqokelela lonke ulwazi olusuka kwibhlog yakho lube yincwadi emnandi… mhlawumbi ungafumana imodeli yokubhalisa evaliweyo okanye incwadana yeendaba eqhubekayo kwaye ikubonelele ngokhuseleko olukufaneleyo.
Mhlawumbi isikhokelo sokuQala kweNtloko kuPhuhliso lweMveliso kunye noLawulo? Qiniseka ukuba uyayifaka le mifanekiso mibini -balisa ibali lonke!
Ukujonga ikhompyuter yam
Epreli 8, 2007 ngo-12: 54 AM
Awunakuvuma ngakumbi. Ibhlog kaKathy yayiyenye yeyokuqala endiyibhalisileyo, kwaye ibonakalisile ukuba iligugu ukusukela ngoko. Ndikhumbula ndifunda amanqaku angaphantsi kweshumi elinambini kwaye ndisiya "wow" kanye emva koko. Enye yeeblogi ezingaze zikumangalise ngobunzulu kunye nokuqonda kobudlelwane phakathi kwamashishini kunye nabathengi kunye nokusebenziseka kwesoftware.
Inyaniso iyaxelwa, ndicaphuka mpela kuye nabani na owenze le nto kwaye wabangela ukuba oku kuphele. Ndicinga ukuba konke esinokukwenza ngoku kukumba izinto ezindala kwaye sifunde, kufana nento oyenzileyo apha.